၂၉ ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၁
ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအ၀ေး (ဓာတ်ပုံ - United Nations)
မြန်မာနိုင်ငံအကျပ်အတည်း၊ ပဋိပက္ခနဲ့ ကိုဗစ်အရေး လက်ရှိဘယ်အခြေအနေမှာရှိနေသလဲ Myanmar Crisis: Conflict and COVID – Where Are We Now? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကိုဗစ်အခက်အခဲတွေကို ဒီကနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီကျရင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးကြဖို့ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအခြေအနေ၊ မြန်မာ့အရေး အာဆီယံရဲ့ အချက် (၅) ချက်ပါ သဘောတူညီချက် ဆောင်ရွက်နေမှု တိုးတက်မှု အခြေအနေ၊ စာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ဆိုးရွားလာနေတဲ့ COVID-19 ကူးစက် ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေ စတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လတ်တလော ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်းက ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကို နားထောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကမကထပြုပြီး ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ခေါ်ယူ ကျင်းပတာပါ။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က အမျိုးသမီးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်စူဆန်နာလှလှစိုး၊ ကချင် ကြားဖြတ် နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ (Kachin Political Interim Coordination Team- KPICT) က အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဂွမ်ဆန်းအဲန်စန်းတို့ တက်ရောက်တင်ပြကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Arria Formula Meeting လို့ခေါ်တဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေး အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲကို NUG ကိုယ်စားလှယ်တဦး တက်ရောက်တင်ပြတာ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဧပြီလအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် Arria Formula Meeting အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ခဲ့ချိန်က NUG အစိုးရမဖွဲ့ခင်တည်ရှိခဲ့တဲ့ CRPH အနေနဲ့ ပါဝင် တင်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီ ကြားနာပွဲကို ကျင်းပချိန်ကစပြီး အောက်ပါ ဝက်ဘ်လင့်ခ်မှာ တိုက်ရိုက် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မွနျမာ့အရေး ကုလလုံခွုံရေးကောငျစီ အလှတျသဘောဆှေးနှေးမယျ
မွနျမာနိုငျငံအကပျြအတညျး၊ ပဋိပက်ခနဲ့ ကိုဗဈအရေး လကျရှိဘယျအခွအေနမှောရှိနသေလဲ Myanmar Crisis: Conflict and COVID – Where Are We Now? ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လတျတလောရငျဆိုငျနရေတဲ့ နိုငျငံရေးနဲ့ ကိုဗဈအခကျအခဲတှကေို ဒီကနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ ည ၉ နာရီကရြငျ ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ အလှတျသဘော ဆှေးနှေးကွဖို့ ရှိပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျးက တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအခွအေနေ၊ မွနျမာ့အရေး အာဆီယံရဲ့ အခကျြ (၅) ခကျြပါ သဘောတူညီခကျြ ဆောငျရှကျနမှေု တိုးတကျမှု အခွအေနေ၊ စာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျတှနေဲ့ ဆိုးရှားလာနတေဲ့ COVID-19 ကူးစကျ ပွနျ့ပှားမှုအခွအေနေ စတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ လတျတလော ရငျဆိုငျနရေတဲ့ စိနျချေါမှုတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ပွညျတှငျးက ဒီမိုကရစေီအရေး တကျကွှလှုပျရှားသူတှနေဲ့ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူတှရေဲ့အသံတှကေို နားထောငျဖို့အတှကျဆိုပွီး လုံခွုံရေးကောငျစီအဖှဲ့ဝငျ ဗွိတိနျနိုငျငံက ကမကထပွုပွီး ဒီဆှေးနှေးပှဲကို ချေါယူ ကငျြးပတာပါ။
ဒီဆှေးနှေးပှဲမှာ ကွားကာလ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ (NUG) က အမြိုးသမီးရေးရာဝနျကွီး ဒျေါစူဆနျနာလှလှစိုး၊ ကခငျြ ကွားဖွတျ နိုငျငံရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျအဖှဲ့ (Kachin Political Interim Coordination Team- KPICT) က အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဂှမျဆနျးအဲနျစနျးတို့ တကျရောကျတငျပွကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
Arria Formula Meeting လို့ချေါတဲ့ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ မွနျမာ့အရေး အလှတျသဘော ဆှေးနှေးပှဲကို NUG ကိုယျစားလှယျတဦး တကျရောကျတငျပွတာ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈပါလိမျ့မယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ စဈတပျက အာဏာသိမျးလိုကျပွီးတဲ့နောကျပိုငျး ဧပွီလအတှငျး ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ မွနျမာ့အရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ပထမဆုံးအကွိမျ Arria Formula Meeting အလှတျသဘောဆှေးနှေးပှဲ လုပျခဲ့ခြိနျက NUG အစိုးရမဖှဲ့ခငျတညျရှိခဲ့တဲ့ CRPH အနနေဲ့ ပါဝငျ တငျပွခဲ့ဖူးပါတယျ။
လုံခွုံရေးကောငျစီ ကွားနာပှဲကို ကငျြးပခြိနျကစပွီး အောကျပါ ဝကျဘျလငျ့ချမှာ တိုကျရိုကျ နားဆငျနိုငျပါတယျ။